Iindaba -Uhlalutyo kunye noqikelelo lwe-China yokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe imeko ngo-2021
Uhlalutyo kunye noqikelelo lwe-China yokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe imeko ngo-2021
Phantsi komgangatho wokuba ubhubhane wehlabathi uphantsi kolawulo, uqoqosho lwehlabathi luyekelela kancinci, kwaye uqoqosho lwase China lukhula ngokuzinzileyo, kuqikelelwa ukuba ukungenisa nokuthumela kwelinye ilizwe e-China ngo-2021 kuya kuba malunga ne-4.9 yezigidigidi zeedola zaseMelika, unyaka nonyaka ukukhula malunga ne-5.7%; kuko, ukuthunyelwa kwelinye ilizwe iyakuba malunga ne-2.7 yezigidigidi zeedola zaseMelika, kunye nokukhula konyaka-malunga ne-6.2%; ukungenisa okupheleleyo kuya kuba malunga ne-2.2 yezigidi zeedola zase-US, ngokukhula konyaka-malunga ne-4.9%; kwaye intsalela yorhwebo iza kuba malunga ne-5% yezigidi ezingama-76,6 zeedola zaseMelika. Phantsi kwemeko ethembisayo, ukuthunyelwa ngaphandle kunye nokungeniswa kwe-China e-2021 kunyuke nge-3.0% kunye ne-3.3% ngokwahlukeneyo ngokuthelekiswa nemeko ebekiweyo; phantsi kwethemba elingenathemba, ukuthunyelwa kwamanye amazwe kunye nokukhula kokungenisa e-China ngo-2021 kwehle nge-2.9% kunye ne-3.2% ngokwahlukeneyo ngokuthelekiswa nemeko ebekiweyo.
Kwi-2020, i-China yenoveli coronavirus inyumoniya amanyathelo okulawula ayasebenza, kwaye urhwebo lwangaphandle lwase China lwaqala ukucinezelwa, kwaye izinga lokukhula lenyuka unyaka nonyaka. Umthamo wokuthumela ngaphandle nge-1 ukuya kuNovemba uphumelele ukukhula okuhle nge-2.5%. Kwi-2021, ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle e-China kusajongana nokungaqiniseki okukhulu.
Kwelinye icala, ukusetyenziswa kwezitofu zokugonya kuya kuba negalelo ekuvuseleleni uqoqosho lwehlabathi, isalathiso semiyalelo entsha yokuthumela ngaphandle kulindeleke ukuba iphuculwe, kwaye ukutyikitywa kwesivumelwano sobambiswano lobambiswano lwezoqoqosho (RCEP) kuya kukhawulezisa ukudityaniswa korhwebo phakathi kwe China kunye ne China. amazwe angabamelwane; Kwelinye icala, umda wokhuseleko kwezorhwebo kumazwe ahambele phambili awupheli, kwaye ubhubhane waphesheya uyaqhubeka ukubila, onokuba nefuthe elibi ekukhuleni korhwebo lwase China.